Launch of Enhlanhleni School - Amajuba District Municipality
Launch of Enhlanhleni School
UMongameli uMnumzane Ramaphosa uvule izikole KwaZulu-Natal
Kuqhume umkikizo nenhlokomo uMnumzane Cyril Ramaphosa onguMongameli weNingizimu Africa engena esikoleni samabanga aphansi Enhlanhleni endaweni yaseKlipros eDanhhauser. UMnumzane Ramaphosa obephelezelwa yiloyo obambe njengoNdunankulu KwaZulu-Natal uMnumzane Sihle Zikalala, nguNgqongqoshe woMnyango wezeMfundo eyisisekelo uNkosikazi Angie Motshekga kanye noNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal uMnumzane Mthandeni Dlungwana ubezovula ngokusemthethweni izikole ezintathu ezakhiwe ngendlela yesimanjemanje. Le ngqophamlando yomcimbi ibibanjelwe esikoleni Enhlanhleni ngomhla we-17 ku-April 2019.
Umcimbi ubuhanjelwe yizinkumbi zabantu ebebeqhamuka kuzo zonke izinkalo zeSifundazwe saKwaZulu-Natal bezofakazela lokhu kushintshwa kwempilo yabafundi abamnyama. Sekuwumlando ukuthi ezinye zalezi zikole ebezizothulwa eminyakeni embalwa edlule bezingekho esimeni esigculisayo ezinye zazo zakhiwe ngodaka kanti kwesinye salezi zikole izingane bezifundela ezindlini ezingomahamba nendlwana.
UMnumzane Ramaphosa uqhakambise iqhaza elibanjwe izinhlaka ezahlukene ukuqinisekisa ukuthi iphupho lezingane lokufunda ezikoleni zezinga elihloniphekile liyafezeka.
Uphinde wakhumbuza izethameli zalo mcimbi ukuthi likhulu ibanga eselihanjwe wuHulumeni ukuthuthukisa ezemfundo ebeka ukuthi njengoba sikhuluma uHulumeni usebenzisa imali engaphezu kwezigidigidi ezingama-230 zamarandi ekuthuthukiseni imfundo yamabanga aphansi.
UMongameli wazise ebebehambele lo mcimbi ukuthi uHulumeni unohlelo olubizwa nge-Accelerated Schools Infrastructure Delivery Initiative (ASIDI) okuhloswe ngalo ukubhekana nonya lobandlululo oludala ukuthi nakuba iNingizimu Africa isiqede iminyaka engama-25 ikhululekile kodwa kusenezingane ezifundela ngaphansi kwezihlahla noma ezikoleni ezikhandwe ngodaka.
Uqinisekise izihambeli zalo mcimbi ukuthi uHulumeni unenhloso yokusebenzisa lolu hlelo ukuqeda zonke izikole ezakhiwe ngodaka wakhe ezisemgangathweni.
Ube esegqugquzela abazali ukuthi bagqugquzele izingane ukuthi amathuba eziwatholayo ziwabambe ngazo zombili. “Kithina sonke, ikakhulukazi othisha nabazali, sinxusa ukuba nigqugquzele izingane ukuthi ziwasebenzise lamathuba eziwanikezelwa wuHulumeni.Kunina bantu baKwaZulu-Natal sininikeza lezi zikole ezinhle kangaka ukuthi nizisebenzise ukuthuthukisa amakhono ezingane niphinde nizihlomise ngolwazi”, Kubeka uMongameli.
Uqinisekise umphakathi ukuthi uHulumeni uyakuqonda ukuthi imfundo ayizona nje izakhiwo ezinhle ezifana nalesi sikole Enhlanhleni, yingakho ngaphezu kwesakhiwo esihle uHulumeni ephinde waqikelela ukuthi lesi sikole sino-mtapowolwazi, ama-computer, i-science laboratory nokunye okuzolekelela imfundo yezingane.
Umphakathi ukushayele izandla ukwakhiwa kwalezi zikole ugcizelela ukuthi uyakholelwa ngempela ukuthi uHulumeni unalo uhlelo lokuthuthukisa imfundo ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya.